Seychelles onye bụbu Minista njem nlegharị anya St.Ange na ndị isi Indonesia na-atụle njem nleta
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia » Seychelles onye bụbu Minista njem nlegharị anya St.Ange na ndị isi Indonesia na-atụle njem nleta
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • investments • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Nwere ike 30, 2021
Ndị ọrụ njem njem na St.Ange na Indonesia
Alain St.Ange, onye ndi Seychelles bu ndi njem nleta, ndi njem na ndi isi mmiri nke no na Indonesia na njem oru nke Forum of Small Medium Economics AFRICA ASEAN (FORSEAA), zutere ndi isi ndi njem njem nke Indonesia na Saturday, May 29, 2021 na Raffles Jakarta iji kwurịta maka ịdị njikere maka ụlọ ọrụ ndị njem nleta post COVID-19.
Ndị ọrụ St.Ange na ndị ọrụ Indonesia tụlere nhọrọ atụmatụ atụmatụ maka ọnwa ndị na-abịanụ.
Enweghị oge ịla azụ dịka ndị na-eme njem nlegharị anya gburugburu ụwa na-agba ọsọ maka onye njem na-agagharị agagharị ga-esi banye ụwa COVID dị nchebe.
Ndi isi ulo oru ihe nlere anya nke Indonesia ga agakwuru onye isi oche nke ATB n’oge na adighi anya.
St.Ange, onye isi nke ya Saint Ange Tourism Consultancy Bureau bụkwa Onye isi ala nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) na akụkụ nke Njem Njem Ụwa (WTN). Ọ tụlere n'ụzọ doro anya ụzọ na ụzọ iji belata mmetụta nke COVID-19 yana atụmatụ atụmatụ atụmatụ maka ọnwa ndị na-abịanụ ka ebe ọ bụla na-eme njem nleta na-eme ka ndị na-eme ezumike nwee nghọta.
A na-ahụta Indonesia dị ka nnukwu ụra na-ehi ụra nke òtù ASEAN, mba ahụ na-enyochakwa ụzọ ọ ga-aga n'ihu. Ọ na-anọgide a ewu ewu ebe nkiri njem àjà ọdịbendị dịgasị iche iche, ọmarịcha ịma mma mara mma, yana ụlọ obibi ụwa na ọnụ ahịa ọnụ. Ndị isi nke ụlọ ọrụ ndị njem nleta ga-ezute St.Ange ọzọ n'oge na-adịghị anya maka mkparịta ụka na omume ndị ọzọ.
Ndị nọ na nzukọ ahụ na Alain St.Ange bụ Dr. Sapta Nirwandar, Onye isi oche nke Indonesia Tourism Forum na onye bụbu onye nlekọta Mịnịsta nke njem na Creative Economy; Adi Satria, Onye isi oche ndị isi oche na mmekọrịta gọọmentị na Accor; na Mazi Sandiaga Uno, Mịnịsta nke njem na okike okike nke Republic of Indonesia.
Na mbụ, otu onye na-emepe emepe n’Indoneshia bịakwutere St.Ange ka ọ gwa ya ụzọ ọ ga-esi mee ọtụtụ agwaetiti n’Indoneshia. Agwaetiti ndị a gụnyere Bangka Belitung, Maratua eco-paradise na East Kalimantan, Alor na agwaetiti Rote na Nusa Tenggara Timur, na agwaetiti Banda na Maluku.
Wonderful Indonesia bụ ntinye nke Mịnịstrị nke njem na-akwalite ebe dị iche iche na agwaetiti maka njem nleta anụ ụlọ na nke mba. Ebumnuche ahụ nabatara ụdị niile, ụlọ ọrụ na ndị njem metụtara njem iji guzobe mmekọrịta ma nyere aka gbasaa ozi banyere ọtụtụ onyinye ndị njem na mba ahụ. E nwere ọtụtụ nyiwe, ma n'ịntanetị (mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ntaneti akụkọ, yana websaịtị gọọmentị) yana ndị na - adịghị n'ịntanetị (mmekọrịta na mmekọrịta na njikọ, nkwalite njem, wdg.), A na-eji ha maka mkpọsa ebube nke Indonesia. E kee ihe ịtụnanya dị n’Indoneshia ụzọ ise: Nature, Culinary and Wellness, Arts na Heritage, Recreation and Leisure na Adventure.